Qaxootiga - Sabahionline.com
2015-01-09 Soomaali badan oo deggan xeryaha qaxootiga Kenya ayaa gargaar ha ke heleen hay'adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay ama ha ka waayeene, waxay muujinayaan sida ay u danaynayaan in ay ku noqdaan dalkooda hooyo.
Soomaalidii laga soo tarxiilay Kenya oo ku jira ciriiriri xagga sharciga iyo dhaqaalaha ah
2014-05-30 Boqolaal Soomaali ah ayaa laga soo tarxiilay Kenya taniyo April, kuwaas oo intooda badan sheegaya inay ahaayeen qaxooti oo ay ahayd in loo daayo inay joogaan meesha kaliya ee ay degganaayeen toboneeyo sanadood.
Dareen cabsi iyo rajo isugu jira oo la soo gudboonaaday qaxootiga Soomaalida ee Kenya ee doonaya in ay ku noqdaan dalkii
2014-03-11 Iyada oo qaar ka mida qaxootiga Soomaalida ay bilaabeen in ay si iskood ah dib ugu noqdaan dalkii, ayuu Ururka Caalamiga ah ee Hijrada waxa uu sahan ku sameeyay dadka ku nool xerada qaxootiga Dhadhaab si uu u qiimeeyo dareenkooda ku aaddan hannaanka dib u celinta.
Qaxootiga Koonfurta Suudaan oo dib u soo nooleeyay dhaqaalaha Xerada Kakuma ee Kenya
2014-02-26 Shirkadaha gaadiidka iyo milkiilayaasha ganacsiyada ayaa soo dhoweeynaya korodhka macaamiisha cusub, laakiin guddoomiyaha Gobolka Turkana ayaa ka digay in dhaqaale dhibaato ku dhisan uusan waarayn.
Caqabadaha badan ee ku meeraysan dib-u-cilinta aan khasabka ahayn ee qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Kenya
2013-12-27 Haddii aanan qaxootiga loo fidin wadiiqad nabdoon oo ay maraan, tababar iyo gargaar ay ka soo saartaan nolol-maalmeedkooda, hannaanka dib-u-celintu waxa uu dadka la rarayo badayaa khatar iyaga oo aan heli doonin wax sidaa u sii buuran oo ay ku noolaadaan.
Soomaalida Kenyaanka ah ee qaxootinimada isu diiwaan galiyay oo mashaqo ay haysato
2013-12-02 Iyada oo ay soo badanayso baaqyada celinta qaxootiga Soomaalida, ayaa Kenyaanka isku dayay in ay ka faa'iidaysataan khidmooyinka qaxootiga la siiyo ay mushkiladi ka haysataa xaqiijinta muwaadinimadooda Kenyaan ka.
Faro iska qaad kumbiyuutar ah ayaa hadda la iska rabaa si gargaarka cuntada Kenya loo helo
2013-11-01 Barnaamijka Cuntada Adduunka ayaa isku dayaya inuu la dagaalamo sheegashada cuntada ee beenta ah isaga oo qaxootiga ka codsanaya in ay farahooda si elektaroonig ah uga diiwaan galiyaan xerada qaxootiga Dhadhaab.
Qaxootiga Soomaalida oo si cad u dhalleeceeyay codsiyada xiritaanka xeryaha qaxootiga Kenya
2013-10-08 Welwelka ayaa soo baxaya kadib markii guddoomiyaha guddiga difaaca barlamaanka Ndung'u Gethenji uu sheegay in xeryaha qaxootiga loo isticmaalay "goobo ay ku tababartaan" qaxootiga.
Qaxootiga Dhadhaab oo isugu soo baxay in ay madax cusub doortaan
2013-08-30 In ka badan 1,000 qaxooti ah ayaa ku qornaa waraaqaha lagu codeeyo ee xerada, kuwaas oo lagu dooranayay madaxada xaafadaha iyo qaybaheeda, jagooyinka iskaa wax u qabsada ah ee ka shaqeeya xidhiidhka dawlada Kenya iyo hay'adaha gargaarka.
Al-Shabaab oo dhibaya qaxootiga Soomaaliya ee Kenya ka soo laabanaya
2013-07-24 Kooxdan dagaalyahaniinta ah ayaa jid-gooyooyin ka samaynaya koonfurta Soomaaliya halkaas oo ay qaxootiga ku khasbayaan inay gubaan dhammaan waxa ay wataan.
Walwal isa soo taraya oo ka taagan dadka naftooda dilaya ee dagan xeryaha qaxootiga Kenya
2013-06-20 In kasta oo aan la hayn tirada rasmiga ah ee qaxootiga naftooda goynaya ee Kenya, ayay haddana qaxootigu la wadaageen Sabahi khibradahooda shakhsiga ah ee dhinaca buufiska iyo naf goynta ka jirta xeryaha.
2013-06-14 Qaar kamid ah qaxootiga ayaa ka warwarsan in dib-u-celinta Soomaalida ay khatar-galin karto qorshahooda ah in dalal seddexaad deb u dajin loogu sameeyo.
Iyaga oo dhibaato kala kulmaya Kenya, ayay qaxootigu Soomaaliya ku noqonayaan
2013-04-17 Iyada oo amaanku soo hagaagayo dhulkii hooyo, ayaa qaxootiga Soomaaliya ay door bidayaan in ay Soomaaliya ku noqdaan kadib markii xukuumadda Kenya ay ku handaday in ay xeryaha dib ugu celinayso.
2013-01-30 Kadib markii ay ku milmeen bulshada dhaqan-dhaqaale ee Kenya 20-kii sano ee lasoo dhaafay, qaxootiga Soomaaliyeed waxa ay sheegayaan in dib-u-celint ay bur burinayso wax walba oo ay ka dhisteen dalkooda cusub.
Jabuuti oo wajahaysa caqabado sii kordhaya oo ay qaxootiga ku qabto
2012-11-20 Qaxootiga ku nool Jabuuti kaliya dhib kuma qabaan cariiriga iyo nafaqo-darrada, waxa kaloo dhibi ka haystaa fursadaha in ay gaaraan isku fillaasho oo kooban.
Booliiska Kenya iyo qaxootiga Dhadhaab oo si wada jir ah u shaqaynaya si ammaanka loo hagaajiyo
2012-09-10 Ma jirin weerar argaggixio oo ka dhacay xerada qaxootiga ee Dhadhaab bishii Agoosto, mahadi waxay u noqonaysa wada-shaqayntii oo korodhay iyo dadaal xooggan oo dhinaca la socodka ah, madaxda iyo shacabka degaanka ayaa sidaas leh.
Qaxootiga Dhadhaab oo diyaar u ah in ay aadaan dalkooda -- haddii ammaanka, iyo dowladnimada ay soo hagaagaan
2012-08-23 Soomaali badan oo qaxooti ku ah xerada qaxootiga Dhadhaab ayaa doonaya in ay dalkooda ku laabtaan, ayna goob joog u ahaadaan is bedelada taariikhiga ah, balse qaar badan ayaa ka wal walsan in wali dalku aannu ammaan aheyn.
Bisha Cas Turkiga oo horu-marinaysa nolosha kumanaan Muqdisho kunool
2012-08-13 Hay'adda Bisha Cas ayaa ku deeqday cunno, hoy iyo daawo ay siinayso kumanaan barakacayaal ah oo Soomaaliya jooga, iyadoo ay cunnooyin maalinla ah ay siisa 10,000 oo qof oo lagu siiyo jikooyinka wareega.
Shacabka Muqdisho oo soo dhawaynaya xasiloonida wayn ee bisha Ramadaan, balse wali war-war baa jira
2012-07-20 Iyada oo dukaamadu ay buuxiyeen dadka isu diyaarinaya u dabaaldegga bishan barakaysan, ayaa dadka barakacay ee xeryaha ku nool aysan awoodin in ay baahida nolol maalmeedkooda daboolaan.
Barakacayaasha Soomalida ee Hargaysa oo soo dhaweeyay silsiladaha guul-darrooyinka ah ee soo gaaray Al-Shabaab
2012-07-06 Barakacayaasha Soomaaliyeed ee ka soo cararay rabshadaha sanadihii la soo dhaafay ayaa sheegaya in saaritaanka al-Shabaab laga saaray dhawr magaalo oo Koonfurta ah ay siinayso rajo.
Maalinta Qaxootiga Adduunka oo ay hareeraysay ammaan-darida ka taagan xerada Dhadhaab
2012-06-22 Shaqaalaha hay’adaha gargaaka ayaa sheegaay in in mudda ahba ay dareen ka qabeen xaaladaha ammaanka ee xerada kadib mawjado isugu jira afduubyo iyo weeraro loo adeegsado bam-gacmeedyada.
Yemen ee ay haysato dhibaatadeeda dhinaca barakicidda
2012-05-24 Qaxootiga ayaa waxay wajahaan xaalado qallafsan, marka ay u sii safrayaan Yemen, oo iyada lafteedu ay haystaan dhibaatooyinkeeda dhinaca qaxootiyaasha gudaha ku barakacay iyo gargaarka dibadda ka yimaada oo aan ku fillayn, ayay leeyihiin saraakiishu.
2012-05-15 Iyadoo ay sii hagaagayso xaaladda nabadgelyada, ayay qurbajoogta Soomaaliyeed u soo laabanayaan in ay furtaan meherado oo ay dibna u hantaan noloshoodii ay waayeen intii ay qurbaha ku maqnaayeen.
Roobab mahiigaan ah ayaa daadka raaciyey xeryihii xaqootiga ee ku yiillay hareeraha Muqdisho
2012-05-02 Dadka gudaha ku barakacay ayaa codsanaya agab ay ku gadaamaan guryohooda buulalka ah iyadoo ay daadadku sababeen dhaawacyo iyo dhimashaba
Hay’adaha samafalka oo qaxootiga is-xilqaamayaasha ah uga faa’idaysanaya wanaajinta cunto qaybinta
2012-04-30 Qaxootiga ku jira xerada Dhadhaab ayaa billaabay in ay hay’adaha gargaarka iska kaashadaan sidii ay door hormuud ah uga ciyaari lahaan gaarsiinta cuntada.
Dawladda Kenya oo la dagaallamaysa qaxootinnimada been-abuurka ah
2012-04-26 Saraakiisha ayaa sheegaya in muwaaddiniinta Kenya ee sheeganaya qaxootinimada lagu soo oogi doono eedaymo dambiilennimo.
Roobab mahiigaan ah oo halis ku haya nolosha barakacayaasha Kenya ee sugaya dib-u-dajinta
2012-04-25 In badan oo ka mida barkacayaasha reer Kenya ayaa ka welwelsan in xilli roobaadku uga sii dari doono xaaladahooda nololeed, dawladdana ugu baaqay in ay qaadato tallaabooyin wax-qabad oo dagdag ah.
2012-03-22 Dr. Xaawa waxa ay sheegtay in rajada iyo jacaylka ay u qabto dadkeeda in ay sababeen in ay ku sii dhagganaato go’aankeeda ah in ay u shaqeeyso dadka barakacayaasha ah, in kasta oo ay jirtay lug-gooyada al-shabaab.
Shaqaalihii gargaarka oo ku soo noqonaya xerada qaxootiga Dhadhaab
2012-03-02 Shaqaalaha hay’adaha gargaarka ayaa Dhadhaab uga tagay sababo ammaan dartood, haseyeeshee saraakiil ayaa Sabahi u sheegay in xaalku ka soo raynayo.
Dad sharci-darro ku dagganaa guryo Muqdisho ku yaal oo laga saaray
2012-02-23 Dawladda ayaa qorshaysay in ay dib u furto dhismayaashii sida sharci-darrada ah lagu dagganaa si ay u buxiso adeegyadii guud, halka ay hay’adaha gargaarku isku dubaridiyaan sidii ay u caawin lahaayeen dadka aan guryaha haysan.